Xildhibaan Talyanle ma wuxu noqday Yahya Jammehii Somaliland? (WQ: Ismaaciil Cabdi Warsame) | Sagal News
Bishii ugu dambaysay 2016kii waxa Gaambiya ka dhacay doorasho ay ku tartamayeen Kali-taliyihii dalkaas u arriminayey 20 sanno Yahya Jammeh iyo guddoomiyihii mucaaradka Aadama Barrow. Waxa doorashadaas ku guulaystay Aadama Barrow, Yahya Jammeh-na si aan la filayn oo gobonimo ah ayuu markiiba u hambalyeeyey.
Dunida oo dhan ayaa laga soo hambalyeeyey Yahya Jammeh, iyadoo la leeyahay waa kali-taliyihii koowaad ee garaad yeeshay ee hambalyeeyey doorasho lagaga guulaystay. Wixii uu xumaan hore u soo falay waxa lagu ilaaway go’aankaa geesinimada leh.
Hase ahaatee muddo todoobaad gudaheed oo ah, 9kii December 2016kii, ayuu ku dhawaaqay in uu ka noqday go’aankii uu guuldarrada ku oggolaaday, waxaanu ku doodday in uu yahay madaxweynaha la doortay ee Gaambiya.
“Markii hore daacad baan ahaa, laakiin imikaan ogaaday in codadkaygii la musuqay, waan diiday natiijadii doorashada, aniga ayaa ah Madaxweynaha xaqa ah ee Gaambiya” ayuu yidhi Yahye Jammeh.
Soomaalida ayaa tidhaa nacaskii lumay ee la soo helay wuxu yidhi “Maxaa la igaga faani beritaba waan lumiye.” Yahye Jammeh ayaa xigmaddaas ku sifoobay. Dundii oo dhan baa la yaabtay. Ninkii uu shalay uun hambalyeeyey ayuu haddana kaga daba yimid. Yahye Jammeh caqli xumo waa lagu ogaa, laakiin waalli ilaa xadkaas ah laguma ogayn. Waallidaasi se uma ay shaqayn oo waa la isugu tagay, khasab ayaana lagaga dhigay in uu natiijadii aqbalo iyadoo waliba dalka dibada looga saaray lagana mabnuucay in uu dib ugu soo laabto.
Qofkii labaad ee isaga oo murashaxii ka guulaystay hambalyeeyey haddana natiijadii dib u soo gocday wuxu noqday Xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Talyanle. Isla markii lagu dhawaaqay in Baashe Maxamed Faarax ku guulaystay Guddoomiyenimada Golaha Wakiillada, Xildhibaan Talyanle si kal iyo laab ah ayuu golihii lagu doortay dhexdeeda ugu hambalyeeyey. Waxa sidoo kale hambalyeeyey Guddoomiyaha Waddani Xildhibaan Cabdiraxmaan Cirro.
“Markii hore daacad baan ahaa, laakiin imikaan ogaaday in codadkaygii la is weydaariyey, waan diiday natiijadii doorashada, aniga ayaa ah Guddoomiyaha xaqa ah Golaha Wakiillada. Ha i hambalyeeyo Baashe Maxamed Faarax” ayuu yidhi Talyanle.
Ileyn af aanad lahayn ma qaban kartid. Dhawaqan gocashada ahi wuxu si ba’an u dhaawacayaa sumcaddii xildhibaan Talyanle, kalsoonidii dunidu ku qabtay dimuqraadiyadda Somaliland iyo kalsoonidii shacbigu ku qabeen xisbiga Waddani. Run ahaantii arrinkani xisbiga Waddani wuxu u ekaysiiyey xisbi col hortii jabay oo is dhiibay, tamarta kali ah ee ku hadhayna ay tahay sidii loo carqaladayn lahaa doorashada Somaliland isla markaana loo abuuri lahaa jawi qasan toddobaadyada ka horreeya doorashada .
Xildhibaan Talyanle iyo xisbiga Waddani waxa la gudboon goocashadu ma fiicnee wixii go’aan ay qaateen si kastoo uu qadhaadh u yahay in ay ku adkaystaan. Waxba “dirty game-ku” idiin soo kordhin maayo. Xagxagashana guul laguma helo. Sumcaddiina Ilaashada oo tartankiina masuuliyad ku dara. Dadka aad codka ka rabtaana qalbigooda ilaashada. Baashe Maxamed Faarax-na raaligelin ka siiya dhawaqa aad ka soo daba tuurteen.
Waxa qoray: Ismaaciil Cabdi Warsame